7 Indawo yokuHanjiswa kweNdlela ye-Beaten eYurophu | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > 7 Indawo yokuHanjiswa kweNdlela ye-Beaten eYurophu
Ukuhamba nokufumana iindawo ezintsha kusinika amaphiko okuphupha, Duma, kwaye ufunde. Kwilizwe elikhulu kangaka, phantse akunakwenzeka ukuba ubone yonke into, kananjalo akunakwenzeka ukuba ube namava kwaye wonwabe kuyo yonke indawo eYurophu. Ngeendawo ezininzi ezinomdla, ungaphupha ukuba uzifumane zonke. Ukuba ujonga ngokwenyani njengokonwaba kwindawo yakho kwaye uvulekele iindlela ezintsha, emva koko sinayo 7 engaqhelekanga kwindawo yokubetha eya kuthi ifumaneke.
Ukusuka eFrance ukuya eSwitzerland, 7 amabala endalo, amachibi enzonzobila, kunye neenqaba ezithandekayo zilinde ukuba yinxalenye yealbham yakho yezithombe zeholide ezingalibalekiyo eYurophu. ke, Pakisha ukukhanya kwaye ulungele ukuphatha iinkumbulo kunye namabali kuphela, njengoko uqala inyhweba entsha, kwaye uhambe ngeendlela ezingahambi kakuhle.
1. Ngaphandle kweBeaten Path Destination: Indawo, Fransi
Umda kuLwandle lweMeditera kunye neencopho zePyrenees, Ingingqi ye-Southern Occitanie eFrance iyamangalisa. Ikhaya kwidolophu enqabileyo yeqaba, Toulouse emangalisayo, esimhlophe, newayini, lo mmandla waseFransi unomdla kwaye uyamangalisa ukusuka kwindlela yokubetha eya eYurophu ukubeka phezulu kuluhlu lwakho lweebhaksi.
I-Occitanie yahluke ngokupheleleyo kwi-French Riviera kunye naseParis, enkosi ngesantya sayo esincinci nesiphuphayo. Ngaloo ndlela, ungathatha ixesha lakho ukuhlola ilizwe leCathar kunye neenqaba zalo, kubandakanya uCarcassonne onomtsalane. Ukuba uthanda imisebenzi yangaphandle njengokuhamba ngeenyawo okanye ngerabfu, ke iGorges du Tarn canyon kunye neCevennes National Park zilungile. the Ipaki yelizwe yindawo yokugcina izilwanyana iUNESCO, kwaye yenye yeepaki ezilishumi zesizwe eFrance.
Unokwenza isiseko sakho kwikomkhulu le-pink kunye nenomtsalane, Toulouse, okanye idolophu entle yaseAlbi. Zombini ziyamangalisa ngenxa yendlela ebethiweyo ukuqhekeka kwesixeko eFrance kunye ne-adventure ende kunye Iholide yaseFrance. Unokufikelela ngokulula nangokuthuthuzela iToulouse ngohambo lukaloliwe ukusuka eParis naseBarcelona malunga 5 iiyure.
ILyon ukuya kuToulouse ngoLoliwe
I-Paris ukuya kuToulouse ngoLoliwe
Kumnandi kuToulouse ngoLoliwe
I-Bordeaux ukuya eToulouse ngoLoliwe
2. Hallstatt, Ostriya
Ilali yeholostatt yidolophana enomfanekiso ofanelekileyo obekwe kwiLake Hallstatt. Ngentwasahlobo, bawe, okanye ubusika, yiparadesi egqibeleleyo ngalo naliphi na ixesha lonyaka, ukubonelela ngemisebenzi emininzi yangaphandle yabahambi abanomdla. Okanye ngokuchasene noko, ukuba uphupha ngokuntywila kwichibi ngeglasi ye wayini okanye ukukhwela isikhephe ujikeleze ichibi, IHallstatt yeyona ndawo ifanelekileyo.
lo Indawo entle yenzile eyethu 7 kwiiNdawo zaseYurophu ezibethayo zinoluhlu lwemiqolomba, ikristale echibini echibini, kunye ne-echern Valley kunye nayo imibono emangalisa neendlela. Ukungachazi, ukuba sele ifunyenwe liphela emhlabeni.
IHallstatt yile 3 iiyure kude neVienna ngohambo loliwe. ngoko ke, ukuba ufuna iholide engalibalekiyo kwimihlaba ephefumlayo yase-Austria, kwaye okubaluleke kakhulu kude nezihlwele, ke i-Hallstatt igqibelele kwindlela ebethwe kuyo.
UMunich ukuya eHallstatt nguLoliwe
Innsbruck yaya eHallstatt ngoLoliwe
UPassau ukuya eHallstatt nguLoliwe
URosenheim ukuya eHallstatt ngoLoliwe
3. Ngaphandle kweBeaten Path Destination: Haarlem, Inetherlands
Ngaphantsi iyaziwa kubamelwane bayo iAmsterdam kunye neRotterdam, IHaarlem yeyona ndlela igqwesileyo kwindlela yokubetha e Netherlands. kuphela 18 imizuzu kude neAmsterdam ngololiwe, Umtsalane weHaarlem uya kukukhulisa ubuncinci kwempelaveki ende.
Ilifa lesixeko eliphakathi, umphefumlo ophilayo kunye nokuhamba komoya, Dala umoya omangalisayo. Ukuba unqwenela ukuva iHolland njengeDatshi lokwenyani, emva koko uhambe izitalato zayo ezinqamlezileyo, ukuya kwiGrote Markt. ke, khwela umoya, Umbila weAdriaan, yeembonakalo ezinomdla wesixeko kunye nomlambo.
Enye indlela yokuchitha iholide yakho eHaarlem kukutyelela iindawo ekudala zenziwa kuyo. Buyela ngaphakathi 1620, Pha 100 utywala, kwaye namhlanje usenako ukunambitha ezinye zeendlela ezindala zokupheka. Ngcono, emva kokutyelela enye yeemyuziyam ezininzi esixekweni, kwaye zikho kwiimyuziyam ezingakumbi eHaarlem kunasiphi na esinye isixeko saseDatshi.
Ukushwankathela, le yokubetha track mzi igugu elifihliweyo eYurophu amazwe athande kakhulu kwaye kufanelekile ukutyelelwa!
4. Ichibi le-Orta, ElamaTaliyane
Uninzi lwabakhenkethi baya e-Italia ukuze bancame kwase Italian kwaye wonwabe ebomini, njengoko kwenza abantu bendawo. kunjalo, kukho okungakumbi e-Italiya kunokutshiza iglasi yewayini kunye nepasta esandula ukwenziwa. ILake iOrta kwisithili samachibi 'yindawo eyoyikisayo nenothando. Ifihlwe kude phakathi kweentaba, kwaye yahlulwe kwiLake Maggiore edumileyo nguMonte Mottarone, ILake Orta likufanele ukudumisa kwakho, kunye nexesha lokuva i-Italiykini isusiwe kumkhondo wokubethwa kunye nesantya sobomi.
ukusuka bentaba, ekhwela umkhumbi, iwayini ngaselwandle, kunye nokuqubha, ILake Orta yinto entle kakhulu yaseNtaliyane, esele ifunyenwe ngabakhenkethi.
ILake Orta kukuhamba ngeenyawo iiyure ezimbini ukusuka eMilan, yaye 5 iiyure ukusuka eZurich ngokweembonakalo ezintle zeAlps.
IGenoa ukuya eMilan ngoLoliwe
ERoma ukuya Milan ngu Train
Bologna ukuya eMilan ngoLoliwe
UFlorence ukuya eMilan ngoLoliwe
5. Ngaphandle kweBeaten Path Destination: Bohemia, Umphakathi waseCzech
Iiyure nje ezimbalwa kude kwindawo yokuqhaqha kunye neyasePrague, ilizwe leentsomi kunye neendawo ezintle zomhlaba zilindelwe. Ipaki yesizwe yeBohemian Switzerland, IPaki yeSvycarsko yaseCzech, umda neJamani. UPravcicka Brana, ukwakhiwa kwamatye okumangalisayo, imijelo yamanzi, kunye neendlela ezininzi zokuhamba ngeenyawo, uhambo olufutshane lukaloliwe kude kuDecin, esona sixeko sikufuphi.
Olunye ugcino olukhulu kwindawo emangalisayo ngaphandle yiKladska Indawo yolondolozo lwendalo. Kukho umzila omhle oya echibini, kwaye isothusa ngakumbi ekwindla. kodwa, ukuba ukhetha iidolophu ezincinci kunye ne chateaux, ke uya kuyithanda i-Neo-Gothic IHluboka Chateau.
6. Antwerp, Bheljiyam
Kwibhayisekile okanye ezinyaweni, IAntwerp iyonwabisa kwaye iyabukeka. Isixeko sesibini ngobukhulu eBelgium, IAntwerp ithotyiwe ngabakhenkethi. kunjalo, kuyamangalisa ukusuka kwindawo ebethiweyo kwindlela eya eYurophu ukuba yonwabe impelaveki ibalekile.
Isixeko sahluleke kubini 3 iindawo: endala, Ezantsi, kunye nezibuko, Amakhaya ahlukileyo kwinkcubeko kunye nabantu abavela kwihlabathi liphela. ngoko ke, lizulu eliphambili, Ukusebenzela nantoni na enqwenelwa yintliziyo yakho. Imyuziyam, Imakethi enkulu, icawa, I-top-notch yoyilo lwefashoni, ikumgama nje ongeyure ukusuka kwikomkhulu, ngololiwe.
ke, ukuba uyayithanda idayimane yakho kwezona ndawo zixakekileyo kurhwebo lwedayimane, thanda itshokholethi, kunye nokuya ezivenkileni, oku kugqitywe kwindawo yokufika yitreyini kufuneka.
Ibrussels ukuya eAntwerp ngololiwe
IAmsterdam ukuya eAntwerp ngoLoliwe
ILille ukuya eAntwerp ngoLoliwe
I-Paris ukuya e-Antwerp ngoLoliwe
7. Ngaphandle kweBeaten Path Destination: ilusini, Swizalend
Isicwangciso esigqibeleleyo sokwenza imvakalelo yothando eSwitzerland, I-Lucerne inhle kakhulu. Ukuhamba ecaleni kwechibi, ukubukela iNtaba iPilatus kunye neNtaba yeTlis enamaqhwa ekhephu abonakalise emanzini, ngaphandle kwabakhenkethi abajikelezayo, iphupha laseSwitzerland.
Othandekayo uLucerne isiseko esikhulu se uhambo losuku kwiiAlps, kwaye isele ifunyenwe ngabahambi. Ke uya kufumana ithuba elingenakuthelekiswa nanto ukuze ulonwabele kwaye ujonge iSwitzerland kwindlela ebethwe kuyo. Hamba indlela yeDrako kwaye uvavanye amandla akho kwipaki yeentambo, yiyo yomibini imisebenzi yangaphandle ejikeleze iLucerne.
Ifumaneka emazantsi eAlps kumda weSwitzerland-yaseJamani, ILucerne ayinakulibaleka kwindawo ebethwe kuyo eYurophu. I-Lucerne y gem efihliweyo kumbindi weSwitzerland kwaye ngu juhamba iiyure ngololiwe ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseSwitzerland.
I-Zurich ukuya eLucerne ngoLoliwe
UBern oya kuLucerne ngoLoliwe
IGeneva ukuya eLucerne ngoLoliwe
UKonstanz kuLucerne ngoLoliwe
Ukushwankathela, IYurophu izele yimimangaliso, iintsomi, iimfihlo, kunye nendalo engafundiswanga ngabakhenkethi. Ukuba unqwenela amava angaqhelekanga kwaye uzive awona mazwe makhulu eYurophu. kunjalo, ukuba unqwenela ukuhamba, njengoko kwenza abantu bendawo, emva koko ulinde ixesha elinomtsalane kuyo nayiphi na indawo oya kuyo ekhankanywe apha ngasentla.
Apha Gcina A Isitimela, siya kukuvuyela ukukunceda ufumane amatikiti asezantsi exabiso eliphantsi ukuya nakuphi na ukhenketho olukhethekileyo kuluhlu lwethu.
Ngaba uyafuna ukubethumisa iposi yethu yebhlogu "I-7 Beaten Path Destination in Europe" kwisayithi lakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/off-beaten-path-destinations-europe/?lang=xh ‎- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
Antwerp mzantsiba offbeatenpath kwiindetenbeen train Travel mzantsiocity erentsali travelitaly indawo yokuhamba